PCSX2 waa emulator ugu horeysay PS2 in baaskeeda caddeeyeen in dega Khayaadka oo PS2 waa suurto gal. Horumarinta ee PCSX2 bilaabay sannadkii 2001 by Linuzappz iyo Shadow oo ahaa barnaamijyo loogu emulator Playstation ka PCSX reloaded. Maanta waxa ay leedahay waafaqsan badan oo kulankaas kordhayso la version kasta oo cusub. The version horumarka hadda waxa la sheegay inuu la jaan qaada qiyaastii 94% oo ka mid ah ayaa haatan 2562 tijaabiyay kulan. Liiska waafaqsan buuxa waxaa laga heli karaa goobta rasmiga ah .
Inkastoo bottleneck qaab kiisaska intooda badan waa processor halkii GPU ah, shuruudaha hardware inta badan waa kulanka ku tiirsan. Tani waxay si gaar hab software-ka, taas oo kaliya processor loo isticmaalo xaasidnimo halka hab hardware, GPU ka emulates naqshadeynta ah. Si ay u shaqeeya, kuwa soo socda tilmaamaha gaarka u ah habka ugu fiican yihiin.
Nidaamka qalliinka Windows XP, X86 ama ka sare
Processor Taageero SSE2, Pentium 4 iyo ilaa, Athlon 64 iyo ilaa Modern core Bawdada processor. Intel i5-2400 ama AMD FX-8350 ama ka badan
Xasuusta 2 GB RAM ama ka badan
Naqshadeynta hardware Pixel Shader 2.0 Modern DirectX 11 GPU
Faa'iidooyinka badan ee Playstation 2 Console
Waxay leedahay xallinta caado ilaa 4096 x 4096 iyo sidoo kale qabriga maryo shaandhaynta si ay u sameeyaan kulan PS2 ka khayr badan ay qurxiyo HD asalka ah.
Kara dalalka lagu badbaadinayo, suuragelinayo in aad si deg deg ah ku badbaadsho oo aan ku shuban ku dhowaad meel kasta oo aad ciyaarta.
Waxaa isticmaali kartaa qofka xukuma kasta oo ka shaqeeya daaqadaha tusaale PS3, Madaxweyne Siilaanyo 360 iwm
Kartida in la kordhiyo ama yaraado xawaaraha ciyaarta oo isticmaalaya dhisay limiter jir.
Kartida ay u qoraan in buuxa HD iyadoo la isticmaalayo dhisay ee F12 video taariikhqorihii.
Emulator PCSX2 leeyahay calaamadaha ka mid ah 7.9 (90943 votes) oo lagala soo bixi karaa xiriirka hoose:
PS2 Games in ay diyaar u yihiin emulator PCSX2
Tirada guud ee kulan tijaabiyey in la jaanqaadaan emulator PCSX2 waa 2562. Dhignaashada ka dhigan tahay oo keliya in ciyaarta ma burburin doonaa, ku xirto ama geli loop a. Taas oo muujinaysa in kulamada badan socon, waxaa laga yaabaa inuu cayayaanka, saamaynta post-processing maqan iyo Hooskooda. Tani gaar ahaan waa kiiska ka buuxdo hardware ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii cayayaanka waa wax aan macquul aheyn in ay ka shaqeeyaan qiyaastii, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo hab software inkasta oo ay tani waa gaabis ah ay sabab u tahay waxaa la isticmaalayo kaliya processor ee xaasidnimo. Hoos waxaa ku qoran liiska oo ka mid ah 10ka kulan PS2 diyaar u emulator PCSX2.
10,000 oo xabadood
18 Wheeler - tracker pro American
187 geeyo ama dhinta
24 kulan -Waxaa
7 mucjiso ee dunida qadiimiga
Ace Combat- Qiimeynta Leader
Sida loo soo bixi ROMS kulan Xeon Emulator
Sida loo isticmaalo PCSX2 Emulator inuu ciyaaro kulan PS2
PCSX2 waa Playstation 2 emulator iyo barnaamij lacag la'aan ah isku dayda in ay sii wadaan PS2console si aad u ciyaaro kulan PS2 on your computer shakhsi. Si wax ku ool ah u isticmaali emulator PCSX2 ah, waa in aad soo saaro faylka PS2 BIOS ka nidaamka PS2 si sharci ah helay, rakibi iyo reserved software emulator PCSX2 ka dibna ka drive indhaha ku shuban ciyaarta PS2 ah.
1.Things waxaad u baahan doontaa
2 ciyaarta PlayStation disc
File dumper PCSX2 BIOS
Software gubashadii image disc
2.Then si fudud u raaci doonaa habraaca ku soo socda
Download file BIOS PCSX2 dumper iyo badbaadin si aad desktop.
Midig u guji file iyo dooro "saaro oo dhan" maraan si aad desktop oo guji 'soosaaray' siibka galka
Fur aad software gubashadii disk iyo abuuro CD ah la soo saaro qashin qubka files BIOS waxaa ku.
Geli ah flash drive maran iyada oo ugu yaraan 512MB oo meel bannaan oo lacag la'aan ah u galay dekedda USB aad PS2 ah.
Hadda geliso disk ay ku jiraan faylka qashin qubka BIOS galay aad PS2 oo ay maamulaan nidaamka. File BIOS ayaa si toos ah la badbaadin doonaa flash ah. Sug ilaa iyo inta uu soo bandhigay 'NVM shubidda dhameystirtay' shaashadda. Demi nidaamka, ka saar flash iyo geli ah dekedda USB heli karaa on your computer.
a Hadda download rakibayo PCSX2 buuxa iyo badbaadin si aad desktop.
Midig u guji file iyo dooro "saaro oo dhan", maraan si aad desktop oo guji "soosaaray" siibka gal.
Fur folder faylka, ay helaan faylka eedeysanuhu gudahood folder iyo double guji file ah in la bilaabo rakibayo. The saaxir rakibo PCSX2 bilaabi doonaan.
Riix 'dooro language'on hoos u soo dhaadhacay menu iyo hadhayna in lagu mutaysanayo gudasho la'aanta. Riix sanduuqa 'socda' wada hadal ah ka soo muuqan doonaa.
Riix abuura ogolaan PCSX2 si ay u abuuraan gal ah si loo badbaadiyo files emulator ah.
Riix soo socda, markaas uncheck "goobaha isticmaalka default" ka dibna riix dhirtuba dedeg BIOS PS2 ku soo gudbin idin korinay in flash ah.
Riix Finish si ay u dhamaystiraan rakibo PCSX2 ah.
Hadda, double guji file PCSX2 emulator ku desktop-ka si ay u bilaabaan emulator ah.
Fur aad gutey geliso 2 kulan Sony Playstation disc ah.
Guji file dooro "Run CD / DVD" si ku shuban ciyaarta galay emulator PCSX2 ah.
Haddii computer safar yahay qof aad u weyn, emulator PS2 laga yaabaa in aanay si fiican u shaqayn sidii kulan PS2 waxay u baahan tahay awood badan naqshadeynta processing.
Wixii xaasidnimo ugu wanaagsan, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo cajaladaha la undersides lacag ah. Cajaladaha la undersides buluug mararka qaar adkaan kartaa in la akhriyo DVD laser ah.
Sababo la xiriira nooca xaasidnimo, xataa haddii aad buuxiso shuruudaha lagu talinayaa in qaar ka mid ah kulan aan ordo xawaare buuxa ay sabab u tahay cayayaanka xaasidnimo.
> Resource > Emulator > Sida loo Isticmaalo PCSX2 Emulator inuu u ciyaaro Playstation 2 Games ee PC?